Ogaden News Agency (ONA) – Wakhtiga Kalfadhiga Baarlamaanka Soomaaliya oo Lashaaciyay.
Wakhtiga Kalfadhiga Baarlamaanka Soomaaliya oo Lashaaciyay.
Posted by ONA Admin	/ June 24, 2017
Guddiga Golaha Shacabka ee Soomaaliya ayaa kulan ay Muqdisho ku yeesheen waxay ku go’aamiyeen xiliga uu furmayo Kalfadhiga 2aad ee Golaha barlamaanka, kaasi oo loo mudeeyay 8da bisha July ee soo soo socota.
Kulankaan oo uu shir guddoominayey ku simaha Guddoomiyaha ahna Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad waxaana looga hadlay ajandeyaal dhowr ah oo ay ugu horeyso mudeynta xiliga uu furmayo Kalfadhiga 2aad ee Golaha Shacabka maadaama ay Mudaneyaasha hada ku maqan yihiin fasaxooda Dastuuriga ah.
Xoghayaha guud ee Golaha Shacabka Mudane C/kariin Xaaji Cabdi (Buux) oo ka hadlay qodobbada looga hadlay kulanka Guddiga Golaha Shacabka ayaa sheegay in guddiga Joogtada ahi ay go’aamiyeen in furitaanka Kalfadhiga 2aad ee Golaha Shacabka loo mudeeyey in uu noqdo 08-July-2017 waxaana uu ku wargeliyey dhammaan Xildhibaannada Golaha Shacabka ee fasaxa ku maqan iney usoo diyaar garoobaan furitaanka Kalfadhiga 2aad ee Golaha Shacabka.
Dhinaca kale Guddiga Joogtada ah waxa ay kulankooda uga hadleen howlaha horyaala Golaha iyo sida ay ukala muhiimsan yihiin waxaana howlahaasi ka mid ah ammaanka, dib u eegista miisaaniyadda, guda gelidda dhameystirka Dastuurka, dhameystirka sharciyadii ka yimid Baarlamaankii 9aad iyo qodobo kale.